Trinidad & Tobago, harena mozikaly telo no veriny hatramin’ny fiandohan’ny 2022 · Global Voices teny Malagasy
Ny lafatra sy ny famoronana no vala famaritana azy rehetra
Voadika ny 12 Janoary 2022 15:16 GMT
Sarin'i Clifton Ryan (The Mighty Bomber), avy amin'i Mark Lyndersay tao amin'ny lyndersaydigital.com, nahazoana alàlana. Pikantsarin'i Kenwrick Joseph (Kenny J), avy amina lahatsary YouTube misy ny hirany soca parang ‘The Paint Brush.’ Sarin'i Clive “Zanda” Alexander avy amin'i Joseph Yearwood, nahazoana alàlana.
Zara raha niantomboka ny taona, kanefa — niaraka tamin'ny famoizana an,'i The Mighty Bomber, ilay calypsonian bekotro maroholatra sy ilay mpiangaly soca parang Kenny J, ary ilay mpitendry pianô Clive “Zanda” Alexander— dia fiafaràna fahaizamanao mozika telo sahady no efa hitan'ireo mpankafy ny kolontsaina Trinbagoniàna.
Ny andron'ny Taombaovao, nodimandry teo amin'ny faha-93 taonany i Clifton Ryan, izay tena fantatra be amin'ny endrika noafohezina tamin'ny anaram-petaka nentiny teo amin'ny sehatry ny calypso hoe Bomber. Araka ny lazain'ny fikambanana Trinbago Unified Calypsonians, izy no mpiangaly calypso ela velona indrindra, ary voakilasy ho isan'ireo calypsonian Top 5 ho an'ny taonjato faha-20.
Efa hatramin'ny fahakeliny i Bomber no nanomboka nihira ny calypso tao Grenada, toerana nahaterahany (Grenadiàna ny reniny), nandresy tamin'ny fifaninanam-pirenena tany an-toerana fony izy vao 12 taona monja. Teo amin'ny faha-28 taonany, nifindra izy ho ao Trinidad & Tobago, toerana niavian'ny rainy, ary ny hirany nalaza voalohany, taona roa taorian'izay, dia ny “Gloria,” . Tsy ela izy dia lasa teo ambany fiahian'i The Mighty Spoiler, nianatra ny asa manodidina ny calypso avy amin'ny iray tamin'ireo mendrika indrindra.
Tamin'ny 1960, lasa ho isan'ireo mpikambana tao amin'ny Tranolain'ny Borigady Tanoran'ny Calypso an'ny The Mighty Sparrow izy, toerana iray fanaovana fampisehoana anasongadinana ireo mpiangaly calypso malaza sy ny tolotra isantaona fanomen-dry zareo rehefa fotoanan'ny karnivaly. Fanapahankevitra iray io, nanosika azy ho hitan'ny maro sy nahafahan'ny asany ho re sy nankafizin'ny olona bebe kokoa, izay voarotsirotsin'ny fahafehezany ny hatsikana any anatin'ireo hirany.
Tamin'ny 1964, azon'i Bomber ilay anaram-boninahitra be mpitsiriritra indrindra ao Trinidad sy Tobago, ny Calypso Monarch, tamin'ny alàlan'ireo hirany “Joan and James” sy “Bomber’s Dream,” izay efa nahitàna taratra sahady ny faharesen-dahatra nanànany hoe mety nanana fiantrakany bebe kokoa teo amin'ny sehatry ny calypso izy raha teraka tao Trinidad & Tobago. Na izany aza, tamin'ny 1964 dia resiny tamin'izany fifaninanana izany i Sparrow, izay azo ambara ho efa fahombiazana ihany. Tamina fotoana isankarazany naha-mpanakanto azy, niaka-tsehatra ihany koa izy tao amin'ny Lord Kitchener's Revue, tranolay iray hafa be mpitsidika ary teo ambany fitantananan'ny mpanjakan'ny calypso.
Tamin'ny 2007, na dia nitsahatra aza ka niala ny tontolon'ny calypso izy, nijanona ho fanaja hatrany i Bomber ho an'ireo nàmany, toy ny hoe tompon'ilay endrika zavakanto. Tamin'ny 2021, i Hollis Liverpool (The Mighty Chalkdust), mpiray tanindrazana aminy mpiangaly calypso, dia nidera ny fitarihan-dàlana nomeny ho an'ireo artista tanora.
Azonao jerena ato ny tantaran'i The Mighty Bomber teo amin'ny resaka mozika .
Ny 2 Janoary, Kenwrick Joseph, fiantson'ny rehetra kokoa amin'ny anaran-tsehatra nentiny hoe, Kenny J, dia nodimandry noho ny fahasarotana nateraky ny COVID-19. 69 taona izy.
Calypsonian ihany koa izy tenany, fa tao anatin'ny kazarany soca prang no hitany ho toerana tsara ho azy, izay manafangaro ny mozika soca (fifangaroana fantatra amin'ilay hoe fanahin'ny calypso) sy ny parang, karazana mozika misy dindo latina, hiraina manaraka ny fombandrazana rehefa fotoanan'ny Noely ao Trinidad & Tobago.
Tomponandraikitra ambony fahiny tao amin'ny pôlisy, i Joseph no nahazo ny anaram-boninahitra National Police Service Calypso Monarch tamin'ny 1987, ary io no nanampy azy hanjoria tany anatin'ireo fifaninanana tena mahazatra, toy ny National Calypso Monarch, izay efa in'efatra izy no tafakatra, nahazo ny satroboninahitra tamin'ny 1990 tamin'ny ritsoka “Addicted To Sweet Soca” sy “Leave She Alone”.
Taona telo taty aoriana, lasa klasika tampoka teo ho an'ny vanimpotoana ny tolotra soca parang voalohany avy aminy, “The Paint Brush”— sabatra roalela voasaina tsara mampahatsiahy ny fomba amam-panao karaibiàna mifototra amin'ny fandokoana trano rehefa tonga ny Noely,amin'ny “brushing”, fitenin-jatovo hilazàna ny firaisana ara-nofo.
Talohan'ny nahafatesany, izy dia mpitondrateny nasiônaly mpanentana ny olompirenena mba hatao vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19. Na dia vita vaksiny tanteraka aza izy, tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra dia 48 isanjato monja amin'ireo vahoaka ao Trinidad & Tobago no vita vaksiny.
Nampiana-tena teo amin'ny sehatry ny mozika, Clive Alexander—fantatra amin'ny solon'anarany hoe “Zanda”—dia iray amin'ireo mpisavalalan'ny mozika calypso nampidirana gadona jazz, ilay karazany tokamiavaka lalaovina eo noho eo, nomena anarana hoe kaiso jazz, fifangaroana lafatry ny fanehoana ara-kolontsaina ao an-toerana izay mifàka lalina ao anaty fomba amam-panao nentindrazana ara-mozika midadasika kokoa.
Teraka tao Trinidad atsimo tamin'ny 1939, teo amin'ny faha-10 taonany izy no nanomboka ny andrany tamin'ny mozika, niaraka tamin'ny amponga namboariny avy tamin'ny baoritra ka tambonin'izany no nananganany ireo gadona calypso no sady nanaparitahany niaraka tamin'izy ireny ny fomba fihira tsy nasiana fiomanana, mahazatra fahita amin'ny jazz. Teo amin'ny faha-15 taonany, rehefa nanomboka nandray lesona momba ny klasika izy, lasa ny piano no zavamaneno nankafiziny indrindra. Nateraka ho artista, vetivety izy dia nanomboka nampiditra ny zavatra nianarany ho any anatin'ireo asa famoronany, ary navelan'ny mpampianatra azy izy hampihatra araka izay tiany ny fomba filalao malalaka. Tavela niraikitra tao anatiny ihany koa ny fitiavany mamorona, izy rahateo nahazo diplaoma mpahay maritrano, taorian'ny nianarany tany Angletera.
Nandritra ny fotoana naha-tao Angletera azy, nilona tao anatin'ny mozika jazz i Zanda ary naka lesona mba hanatsaràny ny fahaizany, ka namorona ny tarika azy manokana taty aorian'izay—The Dez Alex Combo—izay nilalaovany ny calypso/jazz fusion. Mazàna ilay tarika no nanao fampisehoana tao amin'ilay Pigalle Club malaza ao Londona, miantso an'ireo artista toa an'i Shirley Bassey sy Sammy Davis Jr.
Vantany vao tafaverina an-tanindrazany, natsangan'i Alexander ny Zanda Gayap Extempo/Kaiso Jazz Workshop mba hirotsahana lalindalina kokoa anatin'ilay zavatra tena mahaliana azy dia ny fanafangaroana mozika araham-panavaozana —mba hamorona, hikaroka ary hitahiry azy io. Tanaty antsafa iray niarahana tamin'ilay mpanao gazety, Peter Ray Blood, nanazava izy, “Nanaovako fanangonana antontan-kevitra ireo Kaiso Jazz noforoniko, ka tanjoko amin'izany ny hamela lova ho an'ny taranako sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Rehefa maty aho, antenaiko ihany koa ny hifehy ny mozika avy any am-pasako. Nanao izany ireo mpamorona klasika ary izay no antony mbola mahavelona an-dry zareo ireny amin'ny alàlan'ny mozikany.”
Tsy azo nodian-tsy hita i Zanda raha vao resaka fetiben'ny jazz ao amin'ny faritra no sady mpitari-dàlana sarobidy ho an'ireo tanora mozisiana marobe koa.
Anguilla 4 herinandro izay